လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ - မှန်ကန်သော CC လိုင်စင်ကိုရွေးချယ်ရန်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ် Linux မှ
ဒီအားသာချက်ကိုယူပြီး 2021 တစ်နှစ်, အ Creative Commons အဖွဲ့အစည်း ဒီကနေ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဒီနေ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အသုံး ၀ င်တဲ့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ကိုခေါ်မယ် "လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ" o လိုင်စင်ရွေးချယ်ရေး.
"လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ" ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည် CC လိုင်စင် စိတ်ဝင်စားပါတီများ၏ဖန်တီးမှုသည်။
ကျနော်တို့ကတခြားအခါသမယမှာဖြေရှင်းပြီးပြီ အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ် အလွန်အသုံးဝင်သည် Creative Commons အဖွဲ့အစည်း။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တွင်ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်ဟုလင့်ခ်ကပြောကြားခဲ့သည် ဆက်စပ်သောယခင် post ကျနော်တို့ကချဉ်းကပ်ဘယ်မှာ, ခေါ်တော်မူ ရှာပါ:
"များစွာသောအကြောင်းအရာများကို Copyleft လိုင်စင်ဖြင့်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည် Creative Commons အဖွဲ့အစည်းရှာဖွေရေးယန္တရား။ ဒီကြီးမားတဲ့ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးမှဂူဂဲလ်၊" ¿Creative Commons လိုင်စင်ရထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ။
Creative Commons လိုင်စင်ရထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ
1 လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ - သင့်တော်သော CC လိုင်စင်ကိုရွေးရန်ဝက်ဘ်
1.1 Creative Commons လိုင်စင်ကဘာလဲ။
1.1.2 Creative Commons အဖွဲ့အစည်း
1.2 License Chooser ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
1.2.2 တစ် ဦး က beta ကိုဗားရှင်း
1.3 Creative Commons အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ - သင့်တော်သော CC လိုင်စင်ကိုရွေးရန်ဝက်ဘ်
Creative Commons လိုင်စင်ကဘာလဲ။
အတိုချုပ်နားလည်ရန်, အဘယျသို့ဖြစ်ကြသည် Creative Commons လိုင်စင်များကပေးတူညီတဲ့၏ဖော်ပြချက် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်
"Creative Commons (CC) လိုင်စင်များသည်မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်ထုတ်ဝေမှုကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပေးရန်အများပြည်သူအားပေးသောမော်ဒယ်စာချုပ်များဖြစ်သည်။ လိုင်စင်ပါ ၀ င်သောကန့်သတ်ချက်များနည်းလေလေအကြောင်းအရာများကို အသုံးပြု၍ ဖြန့်ဖြူးလေလေဖြစ်သည်။ CC လိုင်စင်များသည်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုသူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မဆိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊" Creative Commons လိုင်စင်များ
Creative Commons အဖွဲ့အစည်း
သို့သော်၊ ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင်စာပေများစွာရှိသည်။ ထိုအခါနားလည်ရန်နှင့်လေ့လာရန်ပုံမှန်အတိုင်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည် တရားဝင်ရင်းမြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအရာကို၏။ ထို့ကြောင့်, စံပြအဆိုပါဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် "လိုင်စင်များ" အပိုင်း ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ Creative Commons အဖွဲ့အစည်း ဒါကြောင့်အလွယ်တကူတိုင်ပင်နှင့်လေ့လာနိုင်ပြီး, ၏အတိုင်းအတာနိုင်အောင် CC လိုင်စင်.
"Creative Commons လိုင်စင်အားလုံးသည်တူညီသောအရေးကြီးသောလက္ခဏာများရှိသည်။ လိုင်စင်တစ်ခုချင်းစီသည်ဖန်တီးသူများ (မိမိတို့၏ကိရိယာများကိုသုံးပါက၎င်းတို့ကိုလိုင်စင်ရသူများဟုခေါ်ကြသည်) သည်အခြားသူများအားသူတို့၏လုပ်ငန်းကိုကော်ပီလုပ်ရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုစဉ်သူတို့၏မူပိုင်ခွင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ အနည်းဆုံးစီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောနည်းဖြစ်သည်။ Creative Commons လိုင်စင်အားလုံးသည်လိုင်စင်ရသူများသည်သူတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်ထိုက်တန်သောဆုကိုရရှိရန်လည်းအာမခံသည်။
Creative Commons လိုင်စင်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေသက်ရောက်သမျှကာလပတ်လုံး (၎င်းတို့သည်ယင်းကိုအခြေခံထားခြင်း) ဖြစ်သည်။ ဤဘုံဝိသေသလက္ခဏာများသည်လိုင်စင်ရသူများသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းကိုမည်သို့အသုံးပြုလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါခွင့်ပြုချက်ထပ်မံပေးရန်ခွင့်ပြုခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။"
License Chooser ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
ကျနော်တို့ပြီးသားထုတ်ဝေ၏အစအ ဦး မှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဒီအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ် Creative Commons အဖွဲ့အစည်းအခြေခံအားဖြင့်ရည်ရွယ်သည် သင့်လျော်သော CC လိုင်စင်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါတီများ၏ဖန်တီးမှုသည်။
ယခုလက်ရှိတွင်ရှိသည်2options များ အသုံးပြုမှု -
၎င်းတွင်ပွင့်လင်းသောမျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင်ရိုးရိုး interface တစ်ခုရှိပြီးရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီမှရရှိသောရလဒ်များကိုပြသည်။
တစ် ဦး က beta ကိုဗားရှင်း
၎င်းတွင်သင်ခန်းစာ (သို့) လမ်းညွှန်အဖြစ်အလိုလိုသိပြီးအသိဉာဏ်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူကိုအသင့်တော်ဆုံးသော CC လိုင်စင်ရရှိရန်ရည်မှန်းချက်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရောက်ရှိစေသည်။
Creative Commons အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Creative Commons အဖွဲ့အစည်း၊ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်လိုင်စင်များကိုအောက်ပါအသုံးဝင်သောလင့်ခ်များကိုသင်လေ့လာနိုင်သည် -
အနှစ် 20 Creative Commons ၏
"Creative Commons သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဗဟုသုတများကိုအခမဲ့ဥပဒေအထောက်အကူများဖြင့်မျှဝေခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကိရိယာများသည်ရက်ရော။ စံသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအသုံးပြုရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အကျင့်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်အားပေးလိုသူများအားကူညီသည်။ အကျင့်ကိုကျင့်၏ဖန်တီးမှုအသုံးပြုမှုချင်သောသူတို့အား; နှင့်ဤသင်္ကေတမှအကျိုးချင်သူတွေကို။" Creative Commons ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာလုပ်သလဲ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အသုံးဝင်သောအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်အကြောင်း «Licenser Chooser» o လိုင်စင်ရွေးချယ်ရေး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်သော Creative Commons (စီစီ) နှင့်အဘယ်သူ၏ရည်မှန်းချက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်တိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည် CC လိုင်စင် စိတ်ဝင်စားပါတီများ၏ဖန်တီးမှုသည်, တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » လိုင်စင်ရွေးချယ်သူ - မှန်ကန်သော CC လိုင်စင်ကိုရွေးချယ်ရန်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်
TaskJuggler: အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု software